Sideeda ba, guusha ama guuldarrada xisbiyada qaranku waa mid ku xidhan aragti siyaasi ah, barnaamij aqoon ku dhisan, abaabul qorshaysan | Saxil News Network
Sideeda ba, guusha ama guuldarrada xisbiyada qaranku waa mid ku xidhan aragti siyaasi ah, barnaamij aqoon ku dhisan, abaabul qorshaysan
dhexdhexaadnimo ee tartamayaasha. Hase yeeshee, waxaa muuqda isbeddel aan halka uu ku dambayn doono la xaqiijin karin oo ku yimid xisbiga Kulmiye; Xisbiga xukuumadda madaxweyne Siilaanyo ka soo jeeddo.
Mudane Muuse Biixi musharraxnimadiisu waa sharci, waa na go’aan ka beermay shirkii golaha dhexe ee xisbiga Kulmiye. Waxaan sidaas u leeyahay ma ogi dareen wax ka beddelaya; xisbiga iyo xukuumaddu ba waxay meel mariyeen in Muuse Biixi ahaado nin doorran oo xisbigu isla qaatay doorashada madaxtinimo ee la filayo inay dalka ka dhacdo sannadka 2017. Waxaa barbar socda damaca siyaasiga ah oo ifafaalihiisu yahay mid aan lahayn jiho iyo abbaar sugan oo uu ilaa hadda beegsado. Tusaale ahaan isbahaysiga Kulmiye weli waxay ku abtirsadaan xisbigii ay shirkiisii golaha dhexe qaaddaceen. Rag iyo haweenba kooxdaasi waa wada siyaasi, magac togan ku dhex leh bulshada Somaliland.
Marka aynnu wadaagaynno falanqayntan, waxa mudan inaynnu si hufan oo sareexa ah uga faalloonno, innaga oo wax kasta ku sargoynayna caqliyadda sugan ee aan dheelliga aqoon. Afkaarta aan ilaa hadda dersay markaan dhegaystay, akhriyay, ee naqdiyay aragtida dadyow kala duwan, oo u dhuun daloola xaaladda siyaasadeed ee dalka in badanna arrimahan aan ka hadlayo wax ka qoray, waxaan dareemay in ay weli runtii siyaasigu maqan tahay, bulshada fahamkeedu na yar yahay. Laakiin ummaddu dhaliil kuma laha halka ay maanta joogto, waayo waa garaadkooda.
Garabka isbahaysiga Kulmiye waa koox ilaa hadda isku duuban, waana awood siyaasiya oo xoog badan saamaynna ku leh mujtamaca wax doorta. Way dhici karta in ay furfurmaan oo maalinba midi sallaanka ka siibto, inkasta oo muddo ay ku hawlgali doonaan magacan ay la baxeen ee isbahaysiga. Isbahaysiga laftiisa ayaa wadaaga dan guud oo midaysay iyo dano kale oo kala gaargaar ah. Guusha ama guuldarrada isbahaysigu waxay ku xidhan tahay sida ay danahooda hoose ee shaqsiga ah ama kooxeed u waafajiyaan ujeeddada guud ee keentay inay isbahaystaan. Haa, ujeeddadaa keentay inay hal mar ka dareeraan xukuumaddii ay muddo shan sanno ka badan ka ahaayeen calansidayaasha. Taas lafteedu na ma aha imtixaan sahlan.
Haddaba halkee ayay ku danbaynayaan isbahaysiga Kulmiye? Waxa jira saddex xisbi qaran – Kulmiye, Waddani iyo UCID – oo ay tahay in dadka hoggaaminta dalka quuddaraynayaa ku kala faylaan. Laakiin ma jiro mid fursado miidhan ah oo ay ka wada heli karaan wixii ay ka doonayeen ama mid 100% danahooda ka wada turjumi karaya. Mid kastaa ba waxa uu leeyahay caqabado u gaar ah, kuwaas oo aanay ujeeddooyinka isbahaysiga ka falcelin karin. Tusaale ahaan:
– Kulmiye iyo Muuse Biixi inay isku miidaamiyaan mooyee rejo fiicani uma laabna, Muuse na kama daalayo raacdadooda. Miidaamadaasi hadday suurto gasho oo ay dhacdo waa mid ku koobnaan doontaa shikhsiyaad, laakiin iyaga oo isku duuban ma filayo in ay Muuse la heshiin karaan. Waa inay ragga qaarkii siyaasadda ka muquurtaan ugu yaraan shan sanno oo soo socda, qaarna ay barbar is taagaan Muuse iyaga oo xishoonaya.
– Waddani iyo Cirro inay ku biiraan waxay ka muujinayaan walaac iyo welwel siyaasadeed, sababtuna wax kale ma aha ee kuyuuga ayaa ku dheer.
– UCID iyo Faysal waa xisbi qof keli ah; waa Faysal oo keli ah xisbiga UCID hadday galaan ama ku biiraan waa hawl iyo hawl. Way ku habsaamayaan. Wakhtigu wuxuu ku lumayaa intay ka fekerayaan dhismaha xisbiga rag waxaa u fariidsan ninka saddex talo oo isaga uxun mid guddoonta sidaas si la mid ah siyaasiyiinta isbahaysiga Kulmiye xaaladaas ayay ku sugan yihiin.
Ugu dambayntii, waynnu eegi doonnaa halka uu isbahaysigu ku dambeeyo iyo sida ay awooddooda oo midaysan ama aan midaysnayni u saamayso xulashada hoggaamiyaha mustaqbalka ee 2017.